Vuselela futhi usebenzise i-MX-Linux 19.0 ne-DEBIAN 10.2 ngemuva kokufaka | Kusuka kuLinux
Kulolu shicilelo sizoqhubeka nokunikela ngefayela le- inqubo ejwayelekile ukuze buyekeza futhi wenze ngcono, Kokubili kuya I-MX-Linux 19.0 njengoba UDEBHANE 10.2 ngemuva kokufaka, njengoba eyokuqala yakhela kokugcina.
Ukwenza lokhu Ukufundisa sisebenzise i- Ifayela le-ISO owokugcina Isifinyezo se-MX-Linux, I-64-bit, yangoDisemba 2019, ebizwa MX-19_December_x64.iso, kepha noma ngubani angalanda okwakamuva okutholakala ku- lapha, futhi a Ifayela le-ISO owokugcina Uhlobo oluzinzile lwe-DEBIAN, I-64-bit, yeDVD, yangoNovemba 2019, ebizwa i-debian-10.2.0-amd64-DVD-1.iso, kepha noma ngubani angalanda okwakamuva okutholakala ku- lapha.
Lokhu kuzoba okwethu okokufundisa kokuqala kokufaka ku-DEBIAN 10 - Buster, ngoba ezokugcina zidaliwe zazikuhlobo lwangaphambilini, UDEBHANE 9 - Yelula. Zinjalo, uma kwenzeka ufisa ukuxhumana nazo ngendlela ehlelekile, okulandelayo:
1 Izindatshana ezedlule ku-DEBIAN ne-MX-Linux
2 Izinyathelo nezincomo zangemva kokufakwa ukuze uvuselele, wenze ngezifiso futhi wandise i-DEBIAN 10 ne-MX-Linux 19
2.1.1 Kuphela ukubuyekeza i-MX-Linux
2.1.2 Ukuvuselela i-DEBIAN / MX-Linux
2.1.3 Izenzo zokuzikhethela
2.2 ngezifiso i-
Izindatshana ezedlule ku-DEBIAN ne-MX-Linux
Ungayisebenzisa kanjani i-GNU / Linux Operating Systems yethu? (Bheka ukungena)
Ungayenza kanjani ngezifiso i-GNU / Linux Operating Systems yethu? (Bheka ukungena)
Guqula i-GNU / Linux yakho ibe yi-Distro efanele ukuThuthukiswa kweSoftware (Bheka ukungena)
Guqula i-GNU / Linux yakho ibe yiMultimedia Distro esezingeni eliphezulu (Bheka ukungena)
Shintsha i-GNU / Linux yakho ibe yiDistro Gamer yekhwalithi (Bheka ukungena)
Guqula i-GNU / Linux yakho ibe uHlelo Lokusebenza olulungele iMayini Yedijithali (Bheka ukungena)
Futhi uma kwenzeka, ufuna ukubuyekeza izindatshana ezedlule ku I-MX-Linux, okulandelayo kuyatholakala:
I-MX-Linux 17.1: I-Distro yesimanje, elula, enamandla futhi enobungane (Bheka ukungena)
I-MX-Linux 19 - I-Beta 1: I-Distrowatch Distro # 1 ibuyekeziwe (Bheka ukungena)
I-MX Linux 19: Ikhishwe inguqulo entsha esekwe ku-DEBIAN 10 (Bheka ukungena)
Ngenxa yalezi zihloko, nezinye eziphathelene DEBIAN y I-MX-Linux, abakhuluma ngokuthi Banjani futhi bawafaka kanjani? Sizosuka lapha kuqhubeke, siye ngqo ku- izinyathelo zokufaka ngemuva, yalezi zinguqulo ezintsha ezitholakala ngonyaka ka-2020.
Izinyathelo nezincomo zangemva kokufakwa ukuze uvuselele, wenze ngezifiso futhi wandise i-DEBIAN 10 ne-MX-Linux 19
Khumbula ukuthi izenzo namaphakeji anconywe lapha ukusebenzisa nokufaka anjalo nje, "amaphakheji kunconyiwe", futhi kusala ukuthi ngamunye enze futhi afake konke noma okunye kwakho, kungani kunjalo okudingekayo noma okuwusizo, esikhathini esifushane noma esiphakathi, ukuzazi nokuzisebenzisa, ngokwenza ukuthi zivele zigijime noma zifakwe.
Futhi khumbula ukuthi lezi zenzo kanye / noma amaphakheji zazikhona ihlolwe ngaphambilini kuma-Distros womabili, futhi ungaceli ukukhipha amaphakheji afakwe ngokuzenzakalela kulezi. Ngaphezu kwalokho, azikhulisi ukusetshenziswa kwememori noma i-CPU, ngoba azilayishi izinqubo noma ama-daemon (amasevisi) kwimemori ngokuzenzakalela. Ukwazi kusengaphambili ukuthi iphakethe ngalinye lisetshenziselwani, chofoza lapha.
Kuphela ukubuyekeza i-MX-Linux
A.- Gijima MX-Isibuyekezi kubha yemenyu noma kumenyu yokuqala
B.- Gijimani kusuka ku- ukuphela kokuqala "iseshini yezimpande", ukufakwa kwamaphakeji alandelayo ngomyalo olandelayo:
Ukuvuselela i-DEBIAN / MX-Linux
Gijimani kusuka ku- ukuphela kokuqala "iseshini yezimpande”(Umsuka @ mycomputer $), ukufakwa kwamaphakeji alandelayo ngomyalo olandelayo:
1.- Guqula umsebenzisi owenziwe waba ngumsebenzisi we-sudoers kusuka kumsebenzisi wezimpande
i-adduser myuser impande nano / etc / sudoers myuser ALL = (BONKE: BONKE) BONKE
Nota: Faka umugqa wokugcina ngezansi komugqa othi: root ALL=(ALL:ALL) ALL
2.- Vuselela ukuguquguquka kwe- $ PATH kufayela le-superuser .bashrc: Kuphela kwe-DEBIAN 10
Nota: Khumbula ukuthi enguqulweni ye- "UDEBHANE 10" uma ingaqali "iseshini yezimpande" ngomyalo womyalo «su -» esikhundleni se «su impande» uzodinga ukuvuselela okuqukethwe kokuguquguqukayo "$ PATH" ukuvimbela izinkinga zokwenza umyalo, njengalapho usebenzisa umyalo "Dpkg". Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthi ulungise le nkinga okwesikhashana ngokungeza ifayela le- "INDLELA" kuyadingeka ngomyalo «Thumela» Ngokulandelayo:
Uma ufuna ukuyixazulula unomphela, kufanele ufake ifayili le- "INDLELA" kudingeka ngale ndlela elandelayo:
Imodi 1: Ngomyalo we-echo
Imodi 2: Ngomyalo we-nano
Futhi engeza ekugcineni umugqa olandelayo:
AmaRekhodi: Uma ungena ngemvume ngomyalo "kwakhe -" Ungahlala weqa le nqubo.
Ukudalwa kwefolda yokuqukethwe yangokwezifiso noma izinhlelo zangaphandle ku- «/ opt /»
mkdir -p / opt / ifolda yami chmod 777 -R / opt / my folder chown myuser. -R / opt / ifolda yami
Ukwenza ngokwezifiso izinketho zokumiswa kwePhaneli nezinto zalo
Ezimweni lesi sifundo esibhekise kuzo, I-DEBIAN ne-MX-Linux distros con Izindawo ze-XFCE Desktop con Imenyu ye-Whisker, kungenziwa lezi zenzo ezilandelayo:
Imenyu ye-Whisker: Shintsha usayizi, isithonjana semenyu, uhlu lwezinhlelo zokusebenza eziyizintandokazi, nezinye izinketho zamathebhu we "ukubukeka nokuziphatha" ezifiselekayo ezindaweni zayo.
Ibha yemenyu: Faka futhi / noma ususe amawijethi adingekayo noma owafunayo bese ushintsha isikhundla nezakhiwo zawo.
Futhi, ngohlelo lokusebenza Imenyu Eyinhloko (Alacarte) bangakwazi Nika amandla ukukhubaza izinhlelo zokusebenza ezibonakalayo nezifiselekayo kufayela le- Qala Imenyu.
Yenza ngezifiso izilungiselelo zedeskithophu
Esigabeni (isicelo) esibiziwe Ideskithophu ye-XFCE lezi zenzo ezilandelayo noma izinguquko zingenziwa:
Ingemuva: Khetha ingemuva noma eziningana bese ukhetha imodi yesethulo efanayo noma yonke.
Imenyu: Khetha izinketho ozifunayo noma ezidingekayo kusuka ezigabeni: Imenyu yedeskithophu nemenyu yohlu lwamawindi.
Izimpawu: Khetha izinketho ozifunayo noma ezidingekayo ezigabeni: Ukubukeka nezimpawu ezizenzakalelayo.
Ukwenza ngokwezifiso kwe-GRUB
Endabeni I-MX-Linux Ungaguqula isithombe sangemuva ngokwenza izinguquko kufayela le- Ingqikithi ye-GRUB "Ilineni" okuza ngokuzenzakalela.
Endabeni DEBIAN Ungaguqula isithombe sangemuva ngokwenza izinguquko kufayela le- Ingqikithi ye-GRUB "Si-tarfield" okuza ngokuzenzakalela.
Nota: Lolu shintsho lungenziwa ngesandla kusetshenziswa ifayili le- ukuhlela amafayela wokumisa of the Izihloko ze-GRUB esetshenzisiwe, kepha kungcono ukufaka uhlelo lokusebenza "I-GRUB Customizer" nokwenza lolu shintsho, futhi usebenzise ngokunenzuzo ukwenza imigqa yokokufaka kwe- the I-GRUB.
Ukwenza ngokwezifiso kwe-Conky Desktop
En I-MX-Linux wathi uhlelo lokusebenza seluvele lufakiwe (Umphathi weConky), kodwa ngaphakathi DEBIAN kungadingeka ukuyifaka. Uma sekufakiwe futhi kwalungiswa, konke okumele ukwenze ukukhetha futhi yenza ngokwezifiso iConky lokuzikhethela kwethu.
Lungiselela ukwenziwa ngokwezifiso kwe- Amafayela we-.bashrc impande nomsebenzisi.
Nikeza ukusekelwa kwezenzo ezithuthukile, njengokuhlanganiswa kwekernel noma ezinye izinhlelo zokusebenza.
Nikeza ukusekelwa kuzinhlelo zokusebenza ezibalulekile zabasebenzisi abaphambili (i-multimedia, ama-gamers, abathuthukisi, phakathi kwabanye).
Nikeza ukusekelwa okugcwele emisebenzini yokuminyanisa / yokwehlisa amandla kuhlelo lokusebenza.
Faka ama-plugins nezinhlelo zokusebenza eziyisisekelo (ezibalulekile kanye / noma eziwusizo) ngokuya nge-Terminal Interface (CLI).
Faka izengezo nezinhlelo zokusebenza eziyisisekelo (ezibalulekile kanye / noma eziwusizo) ngokuya nge-Graphical Interface (GUI).
Faka amaphakheji wohlelo lokusebenza oluyisisekelo (olubalulekile futhi / noma oluwusizo) lokuzilibazisa nokuzijabulisa (imidlalo) lwabasebenzisi abavamile (i-office automation).
Endabeni yami, sebenzisa le nqubo ku iDistro MX-Linux yami 19 ukukhiqiza my i-ISO entsha ephathekayo futhi efakekayo nge ukwenza ngokwezifiso ngokweqile nokwenza kahleengijwayele ukukubiza "Izimangaliso", manje kufayela lakho le- Inguqulo ye-2.0. Nginamathisela izithombe-skrini ukuze ubone umphumela:
Kuze kube manje, le ngxenye yokuqala yalesi sifundo. Engxenyeni yesibili sizophawula ukuthi amanye amaphakheji (ama-application) anconyiwe ukuthi aqhubeke nokwenza ngcono (ukugcwalisa) ama-Distros I-DEBIAN 10 ne-MX-Linux 19.
Siyethemba ukuthi lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «DEBIAN y MX-Linux», ezinguqulweni zalo zakamuva kakhulu nezamanje zonyaka ka-2020, ukufeza «actualizarlas y optimizarlas», yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Vuselela futhi usebenzise i-MX-Linux 19.0 ne-DEBIAN 10.2 ngemuva kokufaka
Ngokwazi kwami ​​ekhasini elisemthethweni le-MX akukho MX-19_December_x64.iso Futhi uma uchofoza kusixhumanisi abasishiya ku-athikili, i-0 bit ISO iyalandwa.
Ngikholwa ukuthi le ndatshana ngaphambi kokwenza kahle izodala ubunzima kulabo abalandela imiyalelo.
Isincomo sami: landa i-ISO esemthethweni kusayithi le-MX; bese ufaka futhi ulungiselele ukuhambisana nawo wonke umuntu.
Sanibonani, Gerson othandekayo. Ngizokopisha lapha impendulo engikunikeze yona kuTelegram:
Sengivele ngalungisa isixhumanisi esonakele! Ngesikhathi sokubhala i-athikili uma ngabe bekukhona i-ISO ephelele ye-MX-19_December_x64.iso, njengoba ngikukhombisile isithombe-skrini nge-ISO elandiwe, kepha zonke izifinyezo zikaDisemba manje seziku-zero (0) kb.
Lapho ngiyilayisha yayiphelele, kepha ngicabanga ukuthi othile ufake i-repo ku-0 Kb futhi bonke bavumelaniswa kanjena. Ngisho, iphutha bekungelona elami. Njengoba ngingawaphathi ama-repo, ngiyilayishe iphelele. Futhi noma ngabe kukhethwa muphi isibuko se-MX-Linux, isifinyezo sikaDisemba manje asiziro, kepha izibalo zokwakha zikhona.
Kepha sengivele ngalungisa isixhumanisi, ngakho-ke ngiyabonga ngamazwana abaluleke kangako. Siyabonga ngokuphawula!
Ngamabomu; Ngabe ukwazile ukufaka i-liquorix kernel kusuka endaweni ezinzile?
Sanibonani, Gerson! Cha, kepha ngizokwenza i-athikili ngakho ngale ndaba. Siyabonga ngokuphawula kwakho.
osvaldo santos kusho
Sawubona, okokuqala, ngiyabonga kakhulu ngokuthunyelwe, kungusizo olukhulu ukuqala kepha ngithanda ukwazi ukuthi imiyalo ngayinye yenzani, eminye ngiyayazi kepha eminye ayazi, ngicabanga ukuthi umphakathi wonke uzokwenza kahle ukwazi ukuthi wenzeleni. Ngiyabonga kakhulu futhi
Phendula ku-Osvaldo santos
Kungenzeka yini ukuthi ungeze i-Liquorix Kernel Stable kernel ku-iso lakho ukuze uqhubeke nokwenza futhi udale i-ISO entsha? Angikwazanga ukuthola isixhumanisi sokulanda senguqulo yakho ye-v2.0 🙁
Sanibonani JonathanMG! Angikalayishi i-2.0 okwamanje, kepha ngizamile i-Liquorix Kernel kuyo futhi angikaziboni izinkinga kuyo. Ngeke ize ihlanganiswe, kepha ngizokwenza iphuzu lokuthi ungayemukela ngaphandle kwenkinga.
Ok ngesizathu angitholi inguqulo 2.0 engizoyilanda, izotholakala nini? Kungaba usizo kakhulu ukuthi ngaphakathi kohlelo luzokuvumela ukhethe ukuthi uzoyifaka nini, kungaba yinto ethokozisayo kakhulu kanye nenguqulo ezinzile noma engazinzile, ngiyathemba ukuthi uzobheka ukuphawula kwami ​​ngoba ayikho i-distro ekunika leyo nketho
Faka kuhlu isibuyekezo esisha sezicelo ze-KDE 19.12.1